के महिलामा पनि हुन्छ स्वप्नदोष ? महिला र पुरुष कसलाई बढी ? | Rajmarga
के महिलामा पनि हुन्छ स्वप्नदोष ? महिला र पुरुष कसलाई बढी ?
सपना देख्नु सामान्य कुरा हो ।तर सपनामा शारीरिक सम्बन्ध कायम गरेको देख्नु पुरुषमा एउटा ठुलै समस्या हो । यो रोगलाई स्वप्नदोष भन्ने गरिन्छ। धेरै पुरुष राति यस्तो सपना देखेर डिस्चार्ज हुन्छन् र वास्तवमा आफ्नो पार्टनरसँग राम्रोसँग सम्बन्ध कायम गर्न असमर्थ हुन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा यो दोष उनीरुका लागि एउटा निराशा र लज्जा सावित हुने गर्दछ । तर, तपाईलाई यो पाएर आश्चर्य लाग्ला कि हालै गरिएको अध्ययनमा स्वप्न दोष पुरुषमा मात्र होइन, महिलालाई पनि हुने गरेको पाइएको छ। जर्नल अफ सेक्स रिसर्चमा प्रकाशित अध्ययनको नतिजामा पाइयो कि यो अध्ययनमा सहभागी ३७ प्रतिशत महिलाले वेट ड्रिम्स अनुभव गरेको स्वीकार गरे । अतः यो समस्या अब महिलाहरुमा पनि आमरुपमा पाइएने गरेको छ।
यो लेखमा हामी तपाईलाई महिलामा हुने स्वप्नदोषसँग सम्बन्धित विशेष जानकारी गराउन लागिरहेका छौः
यस्तो छ महिलामा हुने स्वप्नदोष
वास्तवमा पुरुषमा हुने स्वप्नदोषका अनुसार आधा रातमा उनीहरुको लिंग निकै कडा हुन्छ, जुन मात्र एजैक्कुलेशन होइन । धेरै पुरुष सपनामा सम्भोग महशुस गर्दछन्, यस्तोमा उनीहरु निद्रामै डिस्चार्ज हुने गर्दछन्।
यही महिलाहरुको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुको यस्तो सपनामा सेक्सुअल अराउजल वा यौन उत्तेजनासँग सम्बन्धित हुन्छ । जसका कारण उनीहरुको योनीमा गिलोपन कायम रहन्छ । र, उनीहरु निद्रामा नभएजस्तो महशुस गर्दछन् । यस्तो भएको अवस्थामा पनि कतिपय महिला भने रातभर सुतिनै रहन्छन्।
के हो स्लीप अर्गेज्म ?
सुतेका बेला कुनै महिलाले कुनै प्रकारको सम्भोग देखेको खण्डमा उनीहरु सेक्सुअल्ली उत्तेजित हुन्छन् ।यो अर्गेज्मको स्थितिसम्म पुगेपछि अचानक उनीहरुको निद्रा खुल्ने गर्दछ। तपाईलाई बताइहालौ कि निद्राको सुरुवात वा आई एम स्लीप साइकलका बेला महिलाहरुको योनीको रक्तप्रवाहको स्तर पहिलाभन्दा अधिक बढ्दछ र उनीहरुको शरीरले आरामको गहन अनुभूति हुन लाग्दछ।
के कुरा जाडिएको हुन्छ स्वप्न सम्भोगमा ?
सपनामा गरिने सम्भोगलाई नै हामी स्वप्नदोष भन्ने गर्दछौ । यो सपना सम्भोगसँग सम्बन्धित पनि हुन सक्दछ र नहुन पनि सक्दछ । जब कुनै स्त्री वा पुरुष सपनामा गिलोपन गर्दछन्, उनीहरु सपनामा स्वयमलाई उत्तेजित महशुस गर्न लाग्दछन् । यस्तो हुनु उनीहरुका लागि स्वभाविक हो । तर कयौपटक यो धेरै पनि हुन सक्दछ । साइन्सका अनुसार सपनामा मानिसको पेल्भिकका रगतको स्टार बढ्दछ जसले मानिसलाई अधिक उत्तेजित बनाउँछ र यस्तोमा मानिसले सम्भोगको सपना देख्न सक्दछन।
कति पटक हुन्छ महिलामा स्वप्नदोष ?
पुरुषमा स्वप्नदोष अधिक मात्रामा पाइन्छ, जबकि यसविपरीत महिलामा स्वप्नदोषको सम्भावना निकै कम हुन्छ । जहाँ पुरुष सातामा हरेक दोस्रो दिन पनि स्वप्नदोष महशुस गर्न सक्दछन्, यही महिलामा यो वर्षमा एक वा दुईपटक मात्र पनि हुन सक्दछ। यद्यपि कयौ महिला यस्ता पनि छन्, जसलाई स्वप्नदोषको अनुभव कयौपटक हुने गरेको छ।
Previous post: रोचक चुट्किलाः श्रीमान–श्रीमती र रक्सी पसलमा
Next post: रातमा कुकुर रोएको सुन्नु भयो ? यस्ता छन् त्यसका अशूभ संकेतहरु